जसले १ सय पूर्णाङ्कमा १ सय १० अंक पाए — Bhaktapurpost.com
जसले १ सय पूर्णाङ्कमा १ सय १० अंक पाए
भक्तपुरपोस्ट संवाददाता भक्तपुर, २८ असार
भारतका चर्चित वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ सत्येन्द्र नाथ बोस यो दुनियाका एकमात्र यस्ता व्यक्ति हुन् जसले परीक्षामा पूर्णांक भन्दा बढि अंक प्राप्त गरेका थिए । बच्चादेखि नै विलक्षण प्रतिभाका धनी बोसको जन्म कलकत्तामा भएको थियो । प्रारम्भिक शिक्षा घर नजिकैको स्कुलमा लिएपछि उनलाई हिन्दु स्कुलमा भर्ना गरियो ।
यो पटक मैले गणितको प्रश्नपत्रमा एउटा प्रश्न दिएको थिएँ जसलाई कसैले पनि हल गरेनन् । निकै लाजलाग्दो विषय हो यो ।’ आशुतोषको कुरालाई बिचमै काट्ने हिम्मत कसको हुने ? सबैले मुन्टो निहुराए । तर सत्येन्द्र भने बोलिहाले – सर जब प्रश्न नै गलत हुन्छ भने त्यसलाई कसरी हल गर्ने ? सत्येन्द्रले प्रश्न नै गलत भएको बताएपछि त्यहाँ सन्नाटा छायो ।
आशुतोषले तत्कालै सोधे- प्रश्न गलत थियो भनेर कसरी तिमीले भन्न सक्छौ ? सत्येन्द्रले प्राध्यापक आशुतोषकै सामुन्ने प्रश्नलाई गलत सावित गरेर देखाइदिए ।
त्यसपछि आशुतोषले उनलाई धाप मारेर तारिफ गर्न थाले । उनको प्रतिभाको कदर गर्दै स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेसँगै आशुतोषले सत्येन्द्रलाई कलकत्ता विश्वविद्यालयको प्राध्यापकमा नियुक्त गरे ।
पाष्टरले जिउँदो हुने विश्वास दिलाएपछि पाँच दिनसम्म घरमै लास
सबै किरा-फट्याङ्ग्रा हराए भने के हुन्छ?
जनकपुरमा दुईवटा टाउको भएको बच्चाको जन्म
मेसु डाक्टरमाथि काेराेना पोजेटिभ देखिएपछि भएको सामाजिक दुर्व्यवहारप्रति खेद
रत्ननगर नगरपालिकाद्वारा संचालित बकुलहर रत्ननगर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डाक्टर विश्वबन्धु बगालेमाथि कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि भएको...